အလင်း၏ SL Theme မရှိခြင်း | APK ကို Android အတွက် Download
ပင်မစာမျက်နှာ » အားလုံး Apps ကပ » အလင်း၏ SL Theme မရှိခြင်း
အလင်း APK ကို၏ SL Theme မရှိခြင်း
ဒါဟာခေတ်သစ်ရဲရင့်စမတ်ဖွင့်တင်အပြင်အဆင်ကိုအထူးတောက်ပနောက်ခံနောက်ခံပုံများနှင့်အတူအသုံးပြုရန်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲသည်။ ဒီအပြင်အဆင်ကိုလည်းတူညီသည့်အင်နာလော့နာရီ Widget လေးတို့ပါဝင်သည်!
သငျသညျစမတ်တင်ပေးသူကဒီဆောင်ပုဒ်ကိုအသုံးပြုရန်သင့်ဖုန်းပေါ်မှာ install လုပ်ထားရန်လိုအပ်ပါသည်။
, အသုံးပြုရန်ပထမဦးဆုံးတပ်ဆင်ရန်, ထို့နောက်မတ်တင်ပေးသူအတွက် App ကိုအံဆွဲမီနူးထိမှန်> အလင်း၏ Menu ကို Button ကို> Preferences ကို> အဓိကအကြောင်းအရာ> အဆိုပါမရှိခြင်း - Pack ကို။
ငါကအလိုအလျှောက် install လုပ်ပြီးအောက်ပါလုပ်နေတာက enable မပါဘူးဆိုရင်အသုံးပြုသူများသည်တံဆိပ်ခေါင်းအမှောင်အိုင်ကွန် Pack ကို install လုပ်ကြောင်းအကြံပြု: App ကိုအံဆွဲမီနူး> Menu ကို Button ကို> အဓိကအကြောင်းအရာက Settings> Bubble: icon တွေကိုဆောင်ပုဒ်
အန်းဒရွိုက် 4.4 မှာတော့သင့်ရဲ့ status ကိုနှင့်ကျွန်တော်တို့ navigation bar ကောင်းစွာတစ်ဦးအလင်းနောက်ခံစစ်ချီမပြကြဘူးလျှင်သင် App ကိုအံဆွဲမီနူး> Menu ကို Button ကို> Preferences ကို> ကို Global က Settings> Transparent အလှဆင်နှိပ်ခြင်းအားဖြင့်စမတ် Launcher ကိုဆက်တင်ရှိင့်လင်းမြင်သာ disable နိုင်ပါတယ်။
တစ်ဦးကွဲပြားခြားနားအရောင်ပူဖောင်းပုံသဏ္ဍာန်, ဒါမှမဟုတ်နာရီဖောနဲ့ဆင်တူဆောင်ပုဒ်အဘို့မဆိုတောင်းဆိုမှုများနှင့်ငါ့ကို Email ။ ငါအသုံးပြုသူအီးမေးလ်များကိုရန်အလွန်တုံ့ပြန်မှုဖြစ်ကြောင်းကို!
moniya Singh says:
ဇူလိုင်လ 12, 2014 မှာ 3: 13 ညနေ
က Love whattsapp